Posted by လွမ်းအောင်ချစ်(ကလောင်အမည်) at 9:57 PM No comments:
Posted by လွမ်းအောင်ချစ်(ကလောင်အမည်) at 1:27 PM No comments:
တင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ငါ့...ပါပြင်ပေါ်က မျက်ရည်စက်တွေကြားမှာ
Posted by လွမ်းအောင်ချစ်(ကလောင်အမည်) at 3:05 AM No comments:
Posted by လွမ်းအောင်ချစ်(ကလောင်အမည်) at 11:56 AM No comments:
Posted by လွမ်းအောင်ချစ်(ကလောင်အမည်) at 3:28 PM No comments:
ကျွန်တော်၏ဘလော့ကို 24/Jan/2012 မှာပြစုခဲ့ပါသည်
မင်းအပေါ်ယုံကြည်ခဲ့မိတဲ့ ငါ့...ယုံကြည်စိတ်တွေကို ငါ...မုန်းချင်လိုက်တာကွယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ငါ့...ပါပြင်ပေါ်က မျက်ရည်စက်တွေကြားမှာ...
အတိတ်ရဲ့ညဉ့်နက်နက်မှာ... အိပ်စက်ချင်းတွေကို..အိပ်မမက်ရဲခဲ့ဘူး ဆုံနိုင်ခက်ခဲ့တာတောင် ဖြေသိမ့်ချင်းတွေပေးခဲ့တာ... အချစ်အလွမ်းရှိမယ်ဆိုတာ...
အချစ်ဆိုတာ နားခိုရာအရိပ်ပါကွာ... ရင်မှာမင်းအတွက် မျှော်လင့်ချက်နဲ့ သိုဝှက်............... ...
လာတုန်းကလည်း တစ်ယောက်တည်းနော် လက်တွဲခေါ်ကာ ဖော်မပါဘူး ဥစ္စာချည်းနှီးတစ်ကိုယ်တည်း ပြန်သွားတော့လည်းတစ်ယောက်တည်းနော် လက်တွဲခေါ်ကာဖော်မပါဘူး ဥ...
"မပြောပါရစေနဲ့" ရင်ခွင်ရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးပင်လယ်ထဲက ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားတစိခွန်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အမှားအရွင်းနဲ့ အတ္တအသွယ်သွယ် တစ်နွယ်င...
၊မြန်မာ Mobile App က User များကို Viper ဆော့ဝဲကိုသုံးပြီး အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိရုံနဲ့ ဖုန်း free call ခေါ်လို့ရတဲ့ ၊ Message အခမ...
"နေ့ပြန်တိုး" ဘ၀က လေထဲမှာ တိုက်အိမ်ဆောက်နေတယ်...။ မျှော်လင့်ချက်က မိုးကောင်းကင်မှာ...။ နင်မိထားတဲ့မြေကြီးရေ အချစ်ခဏငှားပါ...။ အသည်...
"မသင့်မြတ်ကြသူများ" ဟမ်ဘာဂါနှင့်ထ္မင်းကြမ်း.. ဘီယာနဲ့သံပုရာရေ.. ချောကလက်နှင့်ထန်းလျက်.. ပင်လယ်အစားအစာနှင့်လယ်ကြွက်.. အချစ်နှင့်ငွေစ...
"ပစ္စုန်ပန်အမှားကြောင့် ဖြစ်စေ၊သံသရာတစ်ခုခုကအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်စေ ၀ဋ်ကြွေးခံရတတ်တယ်။၀ဋ်ကြွေးဆိုတာ ကျေအောင်ဆပ်ရတယ်၊ကျေအောင်ဆပ်ပြီးရင်ေ...
http://sonesieyarmaynmar.blogspot.com/2012/02/blog-post_1775.html. Picture Window theme. Powered by Blogger.